Amaphepha eWebhu ama-8 ukwenza iilogo, yenza ilogo yakho SIMAHLA | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UFran Marin | | ILogos, Ezahlukeneyo
Ufuna yenza iilogo mahala? Zimbalwa izihloko kuluntu loyilo olubangela uxinzelelo ngakumbi kunesihloko songenelelo lwabasebenzi. Kwicandelo loyilo lwequmrhu kunye nelogo, kukho inani elikhulu lezixhobo namhlanje ezizama ukubuyisela inani lomyili weklasikhi. Iindlela zibanzi kakhulu: Ukusuka Iinkonzo zoyilo zasimahla ze logo kunye neendleko ezothusayo eziphakathi kwe-5 ukuya kwi-10 ye-euro kwilogo nganye yokukhulula iinkqubo ezikwi-intanethi kunye nokusetyenziswa okuzama ukwenza ukuba kuyilo lweelogo zasimahla ngezisombululo esele zimiselwe ezikhutshwe kwibhanki enkulu yeelogo. Luthini uluvo lwam? Ngokuqinisekileyo iyafana naleyo yomyili wegraphic. Ezi zicelo kunye nezixhobo ziyindlela yokukhuthaza ukungaqondi kakuhle kwaye ikude lee kwinyani: Umsebenzi womzobi wegraphic yinto yoomatshini kunye nenkcitho enokugutyungelwa ngezisombululo ezikumgangatho ophantsi kunye nokuchaneka.
Ukuba u khangela yenza ilogo yakho Isiphumo esomeleleyo, esisebenzayo nesisebenzayo seshishini elibekekileyo kwaye uzama ukufumana uhlobo lopotype olulungele ngokufanelekileyo iimfuno zeprojekthi yakho, mandikuxelele ukuba ezi ntlobo zezixhobo zezona ndlela zezona zilungileyo onokufikelela kuzo. Ke ukuba ungumntu oneprojekthi eqinileyo kunye nenqanaba lokudityaniswa okumodareyitha kwintengiso yakho, kungcono ungazihoyi zonke ezinye iindlela.
Nangona kunjalo, akufuneki sibe krwada ngokugqithileyo nokuba asinakho ukungahoyi ezinye zeenzuzo ezibonelelwa zezi ntlobo zezinye iindlela yenza iilogo mahala. Kuba eneneni, ayizizo zonke iiprojekthi ezilinganayo, ayizizo zonke ezineemfuno ezifanayo okanye zinezinga elifanayo lokuvela kunye nokukhula. Kukho amaxesha apho kunokuba kulungile ukusebenzisa ezi ntlobo zezixhobo zoyilo ze logo. Apha ngezantsi ndiphakamisa amanye ala matyala:
1 Uqale nje ibhlog yakho
2 Ungumfundi woyilo kwaye ufuna ukubona iindlela ezahlukeneyo zelogo
3 Uyilo lobungcali kwaye udinga uburharha obumnyama
4 Izixhobo ezikwi-Intanethi ukwenza iilogo simahla
4.2 Umenzi weLogotypemaker
4.4 ILogo Simahla Akukho mlinganiselo Ipapashwe ngu- Generator
4.5 Umenzi weMpawu zeHipster, yenza uphawu lwakho
4.6 I-Logaster, uyilo lwe logo yasimahla
4.7 Isicatshulwa esivuthayo, iilogo zeYouTube
4.8 ILogo Yes
4.9 Yenza Simahla Simahla
4.10 Uyilo lweMantic
4.11 IiNkonzo zeLogos Simahla
4.12 IigrafikiSprings ILogo uMdali
4.13 I-logo yeCraft
4.14 Lula logo
4.15 ILogo Simahla Akukho mlinganiselo Ipapashwe ngu- Factory Web
4.16 Iigadi zoMbane
4.17 I-logo ye-Snap
4.18 Online Simahla Akukho mlinganiselo Ilogo
4.20 Umbhalo wobugcisa
Uqale nje ibhlog yakho
Ungena kwihlabathi lokudala umxholo kwaye lixesha lokuqala ukuba uqalise olu hlobo lweprojekthi. Awunazo izixhobo eziyimfuneko zokujongana nokuqeshwa komyili, kungasasazi kangako ukuba unolwazi oluyimfuneko lokwenza i-logo yakho. Uqale nje ekuqaleni kwaye Ngaba ufuna ukufumana ilogo Oko kuchaza ngokubanzi umkhwa oza kulandelwa ngumgca wokuhlela. Kule meko, ungazisebenzisa ezi zixhobo ngokwakho ukufumana isisombululo esifanelekileyo.
Ungumfundi woyilo kwaye ufuna ukubona iindlela ezahlukeneyo zelogo
Olu hlobo lwesixhobo lunecala elilungileyo kwaye kukuba zibonelela (okanye zihlala zibonelela) ngeebhanki ezinkulu ezibonisa ukuphuhliswa kwee-logo "ezingahlawulwayo". Njengonxibelelwano lokuqala, kunokuba kuhle ukuba ubatyelele kwaye uziqhelanise neendlela ezahlukeneyo zokwenziwa ezinokusetyenziswa kwilogo. Ngaphezulu kwako konke, kuyacetyiswa (mhlawumbi ngaphezulu) ukuba wenze ingqokelela yeelogo ezitsala umdla wakho, kuba ngale ndlela unokufunda ukufumana isitayile sakho kwaye ufumane isitayile kunye neempawu ezibonakalayo ezinxibelelana nendlela yakho yokuqonda i-aesthetics.
Uyilo lobungcali kwaye udinga uburharha obumnyama
Ndiyayiqonda ngokugqibeleleyo. Kukho amaxesha apho umsebenzi unyuka, uxinzelelo, ukudinwa kuphele kuthatha umthwalo wabo kwaye unokuba ngumthandi wohlobo lomdlalo omnyama njengam. La maphepha ewebhu sikubonisa wona namhlanje anentlantsi eyoneleyo yokukufumana ngaphezulu kokuhlekisa ukuba uyilo oluqiniswe kumadabi aliwaka: Uqinisekisiwe.
Ukusuka kwikona yethu, sizimisele ukukhuthaza umfanekiso ofanelekileyo kumyili wemizobo njengegcisa kwaye kunjalo nokubheja ngexabiso lo msebenzi umangalisayo unawo kuwo onke amanqanaba. Kungenxa yoko le nto kubaluleke kakhulu ukuba siyazi indlela yokufumana indawo efanelekileyo yesixhobo ngasinye esizifumana sikuyo ukuqala kwethu njengabafundi abasafundayo de saba ngabahlonitshwayo nabangcwalisiweyo. Sonke thina siyinxalenye yolu luntu siyazi ukuba uyilo lwegraphic lungaphezu kwayo yonke indlela yonxibelelwano ehlawula ingqalelo ekhethekileyo kubuhle kunye nokusebenza kakuhle. Ukuqala nje kwintsingiselo nakwimpembelelo yegama lonxibelelwano, singalahla konke ukubaluleka kwezi zixhobo kuba unxibelelwano ngokuqinisekileyo lufuna ukubumbana kunye nengxelo, into enganikezelwanga ngoomatshini kunye nokuzenzekelayo. Apha akukho kubumbana, apha sithetha ngolwazi oluphakathi kwaye sihamba sisuka kuyilo lwegraphic ukuya kwibhanki yezisombululo ze-amateur.
Apha sibonisa iindlela ezizezinye ezingama-20 zokufumana ii-logo ngokukhawuleza kwaye zilungiselelwe wena. Ngokucacileyo, ukusuka apha asiyi kwenza naluphi na uhlobo lokunyusa amaphepha ewebhu anikezela ngeenkonzo zepremiyamu zolu hlobo lomsebenzi. Zonwabele!
Izixhobo ezikwi-Intanethi ukwenza iilogo simahla
Njengoko benditshilo, kwi-intanethi kukho izixhobo ezininzi zokwenza iilogo zasimahla kodwa apha siza kukubonisa eyona nto siyifumeneyo. Ewe kunjalo, ukuba ungumsebenzisi ungazisebenzisa ukwenza eyakho iilogo zeYouTube.
I-logo yasimahla inomhleli olula okwi-intanethi oya kuthi usivumele ukuba sidibanise isicatshulwa, imizobo, imibala kunye nezinye iziphumo ezichazwe kwangaphambili ukuze sikwazi ukwenza i-logo ngendlela elula kunye nexesha elifutshane.
Icela kuphela ukuba ufake isicatshulwa kwaye ngokuzenzekelayo ivelise inani elikhulu lezinto onokuzikhuphela ngokuthe ngqo. Ungangena kwiwebhu ukusuka apha.
Ukongeza ekwenzeni iilogo, kule webhusayithi unokufumana ngaphezu kweefonti zombhalo ezili-1.900 onokuzikhuphela simahla kwikhompyuter yakho.
ILogo Simahla Akukho mlinganiselo Ipapashwe ngu- Generator
Enye yezona ndawo zindala kule ndawo kodwa ayikhe iphume ngesitayile. Kule webhusayithi unokufumana ngaphezulu kweelogo ezingama-100.000 zokukhuphela, ke unayo kuzo zonke izinto ozithandayo kunye nemibala. Ngenisa iwebhusayithi yakho ukusuka apha.
Umenzi weMpawu zeHipster, yenza uphawu lwakho
Omnye umhleli onomdla kwi-Intanethi apho unokusebenzisa amanani, izicatshulwa kunye nemibala ukwenza ilogo ngemizuzu kunye nesiphumo esihle sokugqibela. Ungafikelela kweli khonkco.
I-Logaster, uyilo lwe logo yasimahla
Logaster ngumvelisi we logo ekwi-intanethi ekuvumela ukuba wenze uphawu lwekhwalithi kwimizuzu embalwa kwaye simahla. Kufuneka ufake igama lenkampani yakho kwaye ukhethe uhlobo lweshishini. Isebenza ngazo zonke iifomati eziphambili (i-PNG, i-PDF, i-SVG, i-JPEG) kunye nobukhulu obukhulu. Ikwavumela ukuba ukhuphele iinguqulelo zeeprofayili zentlalo (i-Facebook, i-Twitter, i-Instagram, iGoogle Plus) okanye wenze amakhadi oshishino, iimvulophu, njl.
Isicatshulwa esivuthayo, iilogo zeYouTube
Ukongeza kukuvumela ukuba wenze uphawu lwe-logo, ikwaluncedo olukhulu ekuveliseni igama lakho kwiprojekthi kunye / okanye kwiwebhusayithi. Isebenza kakuhle ngesiNgesi ke isebenza kuphela kwiiprojekthi zamanye amazwe okanye kolo lwimi. Fikelela kwiwebhusayithi yenkonzo ukusuka apha.
Nge logo, ewe unokwenza ilogo ngemizuzu ukuqala kumawakawaka eendlela abazilungiselele ngokwamacandelo.
Yenza Simahla Simahla
Yenza uphawu lwasimahla kwi-Intanethi ekuvumela ukuba wenze ii-logo zasimahla kumanyathelo ama-4 alula kwaye uzikhuphele kwisisombululo esiphakamileyo. Ngenxa yenkqubo yayo enobuchule kunye nesantya sayo, kunokuba luncedo kakhulu ukujonga ngokukhawuleza iprototype yakho.
Isixhobo esikwi-Intanethi kwaye inokhetho oluninzi lokwenza ngokwezifiso oluza kukuvumela ukuba uphembelele izinto ezininzi eziguquguqukayo. Ndwendwela iphepha ukusuka apha.
IiNkonzo zeLogos Simahla
IiFreeLogoServices sisixhobo sasimahla kwi-Intanethi esinamacandelo aliqela apho iilogo ezahlukeneyo zahlulwe. Olu khetho lukuvumela ukuba uphuhlise uphawu lwasimahla kwimizuzu nje embalwa. Iya kukubonelela nangokuba unakho ukuyila ikhadi lebhizinisi lakho ngokusekwe kwilogo oyenzileyo, okanye ngokuyisebenzisa ukuyiprinta kwizikipa okanye kwezinye izinto.
IigrafikiSprings ILogo uMdali
I-GraphicSprings sesona sixhobo sinamandla esiboniswe apha, njengoko ukwenziwa kwayo kunye nokukhethwa kokumisela kukhulu kakhulu. Nangona isekude ukuba sisixhobo somyili, ikufutshane nokuba inye. Njengokhetho oluncedisayo, ikuvumela ukuba uqeshe ingcali kwiqela lakho ukuze uphuhlise i-logo oyifunayo, le iya kuba yingcali. Ivumela ukhetho lokucoca ngokuxhomekeka kuhlobo lweshishini okanye iprojekthi ofuna ilogo entsha.
ILogoCraft ikuvumela ukuba usebenze kwibhanki yayo yeempawu onokongeza kuzo isicatshulwa kunye nefuthe lazo zonke iintlobo. Nje ukuba ilogo yakho yenziwe ungayigcina okanye uyikhuphelele ukusetyenziswa kwayo kwixesha elizayo. Uyakukwazi ukufikelela kwiimpawu esele zenziwe ngaphambili ukuze ukwazi ukuzihlela ngendlela elula kakhulu. Banenkonzo yokuyila ilogo ehambelana ne- $ 49.
I-LogoEase sisicelo esikwi-intanethi onokuthi wenze kwaye uyile logo yakho yasimahla kwimizuzu embalwa. Njengokuba oko kwakungonelanga, ikwanazo nezikhokelo zomsebenzisi wevidiyo, ukuze ukwazi ukusebenzisa yonke imisebenzi yayo ngendlela elula nekhawulezayo.
ILogo Simahla Akukho mlinganiselo Ipapashwe ngu- Factory Web
I-logoFactory olu khetho kwakhona lusisiseko ngakumbi, kodwa ekuphuhliseni izisombululo ezilula kunye neelogo zokuqala zinokusebenza. Isimahla kwaye ayifuni naluphi na uhlobo lobhaliso okanye inkqubo yokukhetha ukuze ukwazi ukuyisebenzisa.
Ilogo yegadi sisixhobo esisebenzayo nesisebenziseka ngokulula. Inika iilogo ezinomtsalane nezicocekileyo ngokujonga ngokukhululekileyo nangokukhawuleza.
I-logo ye-Snap ifuna ubhaliso. Ngesi sixhobo unokwenza i-logo ngendlela elula kwaye uqhubeke nokuyihlela okanye ukuyisebenzisa kamva, nangona kufuneka ungene kuqala.
Online Simahla Akukho mlinganiselo Ilogo
Ungasebenzisa usetyenziso lwe-Intanethi loMenzi weLogo ekwi-Intanethi simahla ngokulula nangokukhawuleza. Awudingi ukubhalisa kwaye ungagcina iziphumo zokugqibela zeelogo zakho kwifomathi yePNG.
I-Supalogo yenye yezona zicelo zakudala kwi-Intanethi ukwenza iilogo simahla kwaye isasebenza. Ngale ndlela unokwenza ukhuphele iilogo ngendlela ekhawulezayo nelula. Ubhala isicatshulwa okanye igama le logo, khetha ukhetho lwakho kwaye ukhuphele iziphumo zokugqibela.
Ukuba ungumlandeli womdlalo owaziwayo weMinecraft, ngoku ngeTextCraft unokwenza izihloko kunye neelogo kwisitayile somdlalo wevidiyo, oko kukuthi, kwiibhithi ezi-8. Inkqubo ilula kakhulu kwaye isimahla.
Ukuba ungena kwihlabathi loyilo lwegraphic okanye uyilo eliqhelekileyo, i-Youidraw sisixhobo sokuzoba esisebenza njengesisombululo esinamandla sokuyila kwi-Intanethi. Ngokwazi ukusebenza noochwephesha kwiindawo ezahlukeneyo, uya kuba nayo yonke into oyifunayo ukubonisa isitayile sakho kunye nobuchule kwiimpawu zakho. Inayo yonke inguqulelo yasimahla kunye nepremiyamu ebandakanya izandiso.
Ngaba uyawazi amanye amaphepha apho unakho yenza iilogo mahala? Sitshele ukuba zeziphi izixhobo ozisebenzisayo xa uyila iilogo okanye izazisi ngokukhawuleza nangokulula.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » ILogos » Yenza iilogo mahala
Ngaba ungandenzela ilogo, nceda, ligama lentombi yam nonyana wam, senza iimpahla zemidlalo
indlela yokusebenzisa esi sixhobo
Ndikhangela iqabane sitsho
Uyilo ayisiyonto yam ngoko ke ndikhangela umvelisi we logo oza kundinceda, eyona nto ndiyigqibeleleyo ndiyifumene nabenzi beLogo yasimahla.
Ndiyazi ukuba iposti ayisiyonto intsha, nangona kunjalo unokuyijonga kuba isiqingatha sekhonkco asisebenzi.
Phendula ukujonga iqabane
Ixhegwazana lakho libotshiwe sitsho
Phendula umfazi wakho omdala ngomsonto
Molo, ungandithumelela ikhonkco lokwenza ilogo? enkosi elinde impendulo ...
Ngengozi ndenze ilogo ngephepha elihlawulelweyo kwaye kufuneka ndibhatale iidola ezingama-29, ngaba ikhona into eyenzekayo ukuba andiyenzi?
Enkosi kakhulu kuluhlu lwewebhusayithi, xa unokuhlela iphepha lokuqala, kuba alifumaneki, kubonakala ukuba idomain iphelelwe lixesha :(
Enkosi ngesilumkiso, sele sisusile ikhonkco lokuqala.
Enkosi ngegalelo. I-logo yephepha lewebhu, ngakumbi ukuba imele inkampani, ibaluleke kakhulu kwaye ezi zixhobo zenza umsebenzi ube lula kakhulu.
Obo budenge ... sisithuko kubayili ... kwaye simahla
Phendula kwi paty
Molo uLizbeth. Ndingavuya ukukunceda.
iilogo zeenkampani sitsho
iilogo zibaluleke kakhulu, kuba zibubuso obubonakalayo benkampani, ngenxa yesi sizathu kufuneka ulumke kuyilo lwazo, iposti elungileyo kakhulu.
Phendula kwiimpawu zenkampani
Molo, mva kwemini entle, ndingathanda ukuba undincede ndenze ilogo yephulo lekhansela elithanda imidlalo
I-logo yinto, isimboli okanye uphawu lwegrafikhi eyilelwe ukusebenza njengomfuziselo wenkampani, ke enye yezona mpawu ziphambili ekufuneka ilogo ibenazo zizodwa kwaye ziyodwa ukunqanda ukubhideka kwintengiso phakathi kwabathengi bethu.
Thenga iLogo sitsho
Ulwazi olulungileyo, kodwa ngokoluvo lwam ilogo ibaluleke kakhulu njengomfanekiso wequmrhu kwinkampani kwaye ndicinga ukuba isandla somyili wegraphic okanye ingcali iyimfuneko ukuyenza ilogo elungileyo. Ndiyakumema ukuba ujonge kwiWebhusayithi yeTheku yokuThenga apho uza kufumana ilogo ngexabiso eliphantsi.
Phendula kwi-logo yokuthenga
U-Eloy uLeon sitsho
Ndiyabulela kakhulu ngokwabelana ngamaphepha.
Phendula u-Eloy León
2Santos Dj sitsho
Ngubani ofuna uyilo lwamagama kunye nezaziso ezibhalela iwhatsap 3165177013 yoyilo kwisitayile esahlukileyo?
Phendula 2sosos Dj
Simahla Akukho mlinganiselo ILogo Maker is NOT FREE, ukusuka apha ndizamile kuphela leyo kodwa sele ndizamile iinkqubo ezili-10 ezithi zisimahla kwaye ngokwenyani azinjalo.
Le YINKCUKACHA YEXESHA… ndisazi ukuba apho ithi simahla kuthetha ukwenza i-logo yasimahla kodwa ukuyifumana ngokuhlawula bendiya kuba ndatyala imali ekwenzeni ilogo ngokwam kwiinkqubo zoyilo okanye imali kuyilo olwenziwe yingcali.
Ukuba ngenene kukho NAKUPHI SIMAHLA engeyondawo ethe tyaba, mandazise yeyiphi. nangona ngelo xesha usenokuba uyile ilogo ngefotoshop okanye efanayo.
Enkosi kwaye ungachithi ixesha lakho nakweyiphi na inkqubo de abo bathi bayisebenzisile bathi umdali nguye obakhonzileyo!
Zamora zamaKristu sitsho
Kwi-Line Logo Maker ayikhululekile
Phendula uChristian Zamora
enkosi ulwazi olulungileyo
UFernando Garcia sitsho
Ulwazi olulungileyo. Nangona kunjalo, kuya kufuneka uhlawule ngokukhuphela. Andifanelanga ukuthi isimahla.
Phendula uFernando Garcia
Ndiyayithanda indlela obhala ngayo, enkosi kakhulu, ndiza kuhlala ndifunda ibhlog yakho.
mario bravo sitsho
Nceda, ndingathanda ukuba undincede ndenze ilogo kwirediyo ekwi-Intanethi yase-Ecuador, enkosi
Phendula mario bravo
ILester moya sitsho
Ndikucebisa ukuba uhlele le posi njengoko uninzi lwezi ndawo zinganikezeli ngenkonzo yasimahla, ngokubhekisele.
Phendula uLester Moya
I-Adobe Spark sisizukulwana esitsha se-Photoshop